Translate because we cannot forever smil in Burmese
Results for because we cannot forever smile , translation from English to Burmese
We cannot allow things to remain this way.
တပည့်တော်တို့ကိုလည်း၊ ငါတို့၌ မုန့်မပါသောကြောင့် ဤစကားကို မိန့်တော်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။
သန့်ရှင်းသောနာမတော်ကို ခိုလှုံသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် ထာဝရဘုရား၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။
မာနော်ကလည်း၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မြင်သောကြောင့်၊ ဆက်ဆက်သေတော့မည်ဟု မယားအား ပြောသော်၊
We cannot help but ask ourselves – do we really need such annual exercises?
လတ်​တ​လော​မှာ အဲ​ဒါ​တွေ​က ကျွန်တော်​တို့​အတွက်​ရော အာ​ရှ​ပ​စိ​ဖိတ်​ဒေသ​အတွက်​ရော အသုံး​မ​ဝင်​ပါ​ဘူး။
Without clear answers to these questions, we cannot achieve fast and accurate diagnosis and effective treatment.
ဤမေးခွန်းများအတွက် ရှင်းလင်းသောအဖြေများ မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လျင်မြန်ပြီး တိကျမှန်ကန်သော ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုနှင့် ထိရောက်သောကုသမှုကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
We are not doing this because we want to be an aggressor, we are not doing this because we want escalation.
ဒါ​က ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကို ထိန်းသိမ်း​ဖို့​ပါ​ပဲ။
ငါ့အိမ်သူအိမ်သားတို့က၊ အဘယ်သူသည် ငါတို့သခင်၏ အမဲသားကိုတောင့်တ၍ မဝဘဲနေရ သနည်းဟု မဆိုတတ်သလော။
အံ့ဩဘွယ်သော အခြင်းအရာပါလျက်၊ ဘုရားသခင်သည် အသံတော်နှင့်မိုဃ်းချုန်းတော်မူ၏။ ကြီး သောအမှု ငါတို့နားမလည်နိုင်သော အမှုတို့ကို ပြုတော်မူ၏။
ခဏဟူ၍မိန့်တော်မူသော် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း မိန့်တော်မူသောစကားကို အကျွန်ုပ်တို့သည် နားမလည်ဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။
ထိုသေတ္တာပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးသော ခေရုဗိမ်တို့သည် အပြစ်ဖြေရာ ပလ္လင်ကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ ထိုအရာများကို ယခု သေချာစွာ ပြောစရာအကြောင်း မရှိ။
အကြောင်းမူကား၊ တယောက်သောသူသည် လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံသည်မှန်လျှင်၊
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း၊ ငါတို့သည် ပညတ်တရားလက်၌ရှိသောကြောင့်၊ ဒုစရိုက်ကို ပြုရမည် လော။ ထိုသို့မပြုရ။
အိုဘုရားရှင်၊ ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားသော ကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်၊ မင်းသား၊ အသက်ကြီး သူမှစ၍ အကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်နှာပျက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ကြ ပါ၏။
ငါတို့သည် အဘယ်သို့လျှောက်ရမည်ကို သွန်သင်ပါ။ ငါတို့သည် မိုက်သောကြောင့်၊ အလိုအလျောက် မလျှောက်တတ်ကြ။
mi nombre es (Spanish>Quechua)varitypists (English>Russian)ye dil dhadka do (Hindi>English)busy ka ba diyan sa trabaho mo (Tagalog>English)mu me le le (Hindi>English)math and science club (English>Tagalog)pinaputukan ng baril (Tagalog>English)xin chao ban (Vietnamese>English)lokal na pagaaral tungkol sa k 12 edukasyon (English>Tagalog)i don't trust girls (English>Hindi)kukuha ng id (Tagalog>English)komplementera (Swedish>English)鉴于秘书处的机构调整 (Chinese (Simplified)>English)meaning of panoti in english (Hindi>English)conclusion in hindi aids (English>Hindi)kaguran (Tagalog>English)masasayang lang pera mo (Tagalog>English)i am so happy for you (English>Swahili)pinipirahan lang kita (Tagalog>English)affair (English>Tagalog)we enjoyed talking with each other (English>Arabic)mai use kehta hu (Hindi>English)he saw me (Spanish>English)super me (Latin>English)dames (English>Tagalog)